War Deg Deg Ah:Maxaa ka jira inuu is-casilay Masuul ka Tirsan Dawlada Somalia | khaatumonews
War Deg Deg Ah:Maxaa ka jira inuu is-casilay Masuul ka Tirsan Dawlada Somalia
Waxaa baraha bulshada qabsaday qoraal la sheegay inuu yahay is-casilaad uu gudbiyey agaasimaha Hay’adda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Soomaaliyeed ee NISA Xuseen Cismaan Cismaan (Uurkus).
Qoraalka is-casilaadda oo si fiican loo habeeyay ayaa khaladaadka ku jiray ay ka mid ahaayeen inuu agaasimaha is-casilaadiisa u gudbiyey Wasiirka Amniga iyo eedeyn qaawan oo ku lid ah agaasimaha madaxtooyada iyo madaxa shaqaalaha NISA, waxaana la xaqiijiyey in qoraalkaasi uu yahay mid gacan ku sameys ah [Fake].
Dad fara badan ayaa qoraalkaasi soo dhigay baraha bulshada oo qaarkood ay yihiin mas’uuliyiin iyo saxafiyiin aan hubsan qoraalka, iyadoo qoraallada noocan ah ay si weyn ugu soo kordheen baraha bulshada.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in agaasimaha NISA la saaray cadaadis xoog leh oo keenay in laga xayiro akoonada Hay’adda NISA ee Bankiga Dhexe, iyadoo aan weli xal loo helin qalalaase ka dhex taagnaa maamulka sare ee Hay’adda Sirdoonka markii shaqada laga joojiyey taliye ku xigeenadii NISA.
Somaliya waxa ku degey maxaan cunaa. ” Nin soori kaa qaaday waa nin seefi kaa qaaday”. Dal la wada beecinayo, ka Hargeysa joogga waa iib dhanka uu maamulo, sidoo kale ka Garowe joogga waa iib dhanka uu jooggo, inta kale iyaga waxa laga maamula hal meel oo iyaguna waa iib. Waa ” lulu Moppet”. Xilka ay sidaan maba oga. Dadka yaqaana english-ka doodan si fiican u dhuuxa…